सर्वश्रेष्ठ अमेजन खोजशब्द उपकरणहरू के हो?
अमेजन खोजमा तपाईंको उत्पादनहरू दृश्यात्मक बनाउन, तपाइँलाई तपाइँको लिस्टिग अनुकूलन गर्न आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अप्टिमाइजेसन तत्वहरू मध्ये एक खोजशब्द अनुसन्धान हो। तपाईंले आफ्नो उत्पादनको स्तर सुधार गर्न यो प्रक्रियाको आधारभूत कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ।
खोजशब्द अनुसन्धान वास्तविक खोजी प्रश्नहरु र खोज सर्तहरु को पहिचान गर्दै छ जुन तपाईंको संभावित ग्राहकहरु लाई तपाईंको उत्पादनहरु को खोज गर्न को लागी उपयोग गर्दछ। यो प्रक्रिया अमेजन व्यापारीहरूको लागि आवश्यक छ किनकि यसले उनीहरूको उद्योग वा बजार आला भित्र सम्बन्धित खोज सर्तहरू खोज्न मद्दत गर्दछ। यी सम्बन्धित कुञ्जी शब्दहरूले उनीहरूको उत्पादनको स्तर सुधार गर्न र समग्र व्यवसाय राजस्व बढाउने मौका दिन्छ।
केहि व्यावसायिक अनलाइन अनुसन्धान उपकरण खोजी सुझावहरु लाई प्रस्तावित गर्न को लागी कि खोजशब्द अनुसन्धान को विस्तार गर्न को लागी उपयोग गर्न को लागी अगाडी बढाया जा सकता छ। उत्तम अमेजन खोजशब्द शोध उपकरण भेद गर्न गाह्रो छ, तर सबै प्रभावकारी व्यक्तिहरूले Google Keyword Planner, Keywordtool Source .io, र Semalt Amazon SEO समावेश गर्दछ। यी उपकरणले तपाईंलाई विस्तृत खोजशब्द अनुसन्धान र कीवर्ड पद ट्रैकिंगको साथ प्रदान गर्न सक्छ।
सबै भन्दा लक्षित कीवर्ड कसरी खोज्न र तपाईंको उत्पादनको स्तर सुधार गर्न सकिन्छ?
धेरै अनलाइन अनलाइन सुझाव उपकरणहरू एकैसाथ काम गर्छन्। पहिला, तपाइँले खोज सुझाव बक्समा आफ्नो बीउ खोज शब्द सम्मिलित गर्न आवश्यक छ र त्यसपछि "खोजी सुरु गर्नुहोस्" क्लिक गर्नुहोस्, त्यस पछि, तपाइँ अमेजन सुझावहरूमा आधारित उपयुक्त कीवर्डहरू सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो कुञ्जीपाटीहरू सर्टिस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र केवल तपाइँको उद्योगको लागि सबै भन्दा सान्दर्भिक छोड्नुहोस्। त्यहाँ धेरै प्रकार्यहरू छन् जुन तपाईंको खोजीलाई सजिलो पार्छ। यदि तपाईंले भर्खरै तपाइँको अनलाइन व्यवसाय स्थापना गर्नुभएको छ भने, यो लामो पूरै कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्न उचित छ किनभने तिनीहरू तपाईंलाई उच्चतम अमेजन सेवा सर्पसम्म पुग्न मौका दिनेछन्।
तपाईंले आफ्नो व्यापारिक शब्दहरूको सबै भन्दा बढी प्रासंगिक सूची प्राप्त गर्नुभए पछि तपाईलाई उत्पादन ट्र्याकिङ पृष्ठमा जानुहोस् र आफ्नो सर्तहरू थप्नुहोस्। कीवर्ड ट्र्याकिङ स्वचालित रूपमा सुरु हुन्छ जब तपाईं आफ्नो लक्षित खोज शब्दहरू प्रणालीमा थप्न सक्नुहुन्छ। अमेजन ट्र्याकिङ उपकरणले तपाईलाई हालैको रेटिङ अद्यावधिकहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंको हालको कुञ्जी शब्दहरू ट्रयाक गरेर। यस जानकारीले तपाईलाई तपाईका प्रतियोगिहरूको अगाडी बढावा दिन मद्दत गर्नेछ। यसबाहेक, तपाईं जाँच्न सक्नुहुनेछ वास्तवमा तपाईका उत्पादनहरू किन रैंकिंग छन्।
तथापि, यो खोजशब्द सुझाव प्राप्त गर्न समस्या को आधे हो; तपाईलाई पनि उनीहरूको पद सुधार गर्न आवश्यक छ। यही कारणले तपाइँले तपाइँको लक्षित कीवर्डहरू रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिला, तपाइँले तपाइँको शीर्षक र विवरणलाई ध्यानपूर्वक उनीहरूको सबै भन्दा सान्दर्भिक खोजी सर्तहरू थप गरी अनुकूलन गर्न आवश्यक छ। यसबाहेक, तपाइँले प्रयोगकर्ताको अनुकूल URL हरू तपाईंको ब्रान्ड नाम र लक्षित कीवर्डबाट सिर्जना गर्न आवश्यक छ। एक जटिल मा यी सबै अनुकूलन रणनीतिहरूले तपाईंको अमेजन खोजशब्द रैंकिंगलाई सकारात्मक असर पार्छ र तपाईंको संभावित ग्राहकहरु बीचको ब्रान्ड जागरूकता सुधार गर्नेछ।
यसबाहेक, तपाईंको सूचीमा विशेष ध्यान दिइनेछ। तपाइँका उत्पादन फाइदाहरू र सुविधाहरूको बारेमा सबै भन्दा सान्दर्भिक जानकारीसँग खोजकर्ताहरू र अमेजन बटहरू प्रदान गर्न आवश्यक छ। यसैले तपाईंले सबै क्षेत्रहरू भर्नु पर्दछ कि तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरूले उनीहरूको सबै सम्भावित प्रश्नहरूको जवाफ पाउने निश्चित गर्नुहोस्।